बेडमा छट्पटाइरहेकाहरूको जीवन रक्षाका लागि अक्सिजन बोकेर अस्पताल पुगिरहेकाछन् धुर्मुस ! - Sidha News
बेडमा छट्पटाइरहेकाहरूको जीवन रक्षाका लागि अक्सिजन बोकेर अस्पताल पुगिरहेकाछन् धुर्मुस !
अक्सिजन नपाएर अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेकाहरूको जीवन र’क्षाका लागि हास्यकलाकार धुर्मुस (सीताराम कट्टेल) सिलिन्डर लिएर अस्पताल पुगिरहेका छन्। आफूलाई हास्यकलाकार बनाएर विश्वमा चिनाउने दर्शकको जीवनरक्षाका लागि खटिएको धुर्मुसले बताए।
धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्षसमेत रहेका उनले बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा सञ्चालित १ सय ४० शय्याको को-भिड अस्पतालका लागि ५० वटा सिलिन्डरमा अक्सिजन भरेर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेका छन्। को’रोना महामारीबाट पी’डित भएकाहरूको राहत र उद्धारका लागि आकस्मिक हेल्प कक्षको स्थापना गरेर धुर्मुस ख’टिएका हुन्।
‘महामारीका बेलामा मानवताभन्दा ठूलो अरूको केही छैन। हाम्रो सानो प्रयासले कसैको ज्यान बच्छ भने हामी किन सहयोगी नबने ?,’धुर्मुसले भने,‘यो बेला आफू पनि बच्नु र अरूलाई पनि बचाउनु मानवीय धर्म र कर्तव्य हो। त्यहीभएर जे, जे अभाव र आवश्यकता छ त्यसका लागि सहयोगी बन्न हिँडेको हुँ।’
महोत्तरीको बर्दिबासमा अक्सिजन प्लाट स्थापना गर्ने योजनामा रहेको उनले बताए। आ’त्मबल बढाउनु, सकारात्मक कुरा सोच्नु, पोषिलो खानु, डर र त्रासबाट विचलित नहुन को’रोना संक्रमितलाई धुर्मुसले आग्रह गरेका छन्। ‘स्वास्थ्य सुरक्षाका मा’पदण्डपालना गर्दै स्वयम् अनुशासित हुनु नै महामारीबाट बच्ने औ’षधि भएको सम्पूर्ण दर्शकलाई हा’र्दिक अनुरोध गर्दछु’,
धुर्मुसले भने,‘कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारलाई म स’लाम गर्न चाहन्छु।’ यतिखेर सबैले मानवता देखाउने समय आएकाले सबैलाई राहत र उद्धारमा जुट्न उनले अपिल गर्दै उनले थपे,‘म यतिखेर शुद्ध जनताको सेवक बन्न अघि बढेको हुँ।’
चितवनका जुझारु युवाको सक्रियतामा उनको टिमले एम्बुलेन्स सेवा, र’क्तदान सेवा, मेडिकल काउन्सिलिङ सेवा दिइरहेको छौं। हालसम्म यहाँबाट आठ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई सेवा दिइसकेको छ भने देशको केन्द्रीय भरतपुर अस्पताललाई आवश्यक महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिसकेका छन्।
चितवनमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण अभियानमा जु’टिरहेका धुर्मुस केही सातायता को’रोना महामारी नियन्त्रणमा सक्रिय छन्। महाभूकम्प, बा’ढीपहिरोमा राहत तथा उद्धारमा ख’टेर चर्चा कमाएका धुर्मुस फेरि एकपल्ट को’रोना महामारी नियन्त्रणमा ख’टिएका हुन्।